वर्ष ०७५ लाई बिदाई गर्दा ‘हिट’ को होला ? अनमोल की सलीनमान — News of The World
संसार न्यूज संवाददाताचैत्र २९, २०७५
२९ चैत, काठमाडौ । आज शुक्रबार नेपाली सीने क्षेत्रमा सीने घरानका दोस्रो पुस्ताका प्रतिनिधि अनमोल केसी र सुहना थापाको ए मेरो हजुर ३ सहित २ वटा चलचित्र एकै साथ रिलीज हुदै छन् । वर्ष ०७५ नेपाली सीनेमाका लागि त्यति सुखद नभइरहेको समयमा वर्षको अन्त्यमा रिलीज भएका यी चलचित्रले कस्तो व्यापार गर्लान यो हेर्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन ।
स्टार नायक सलीनमान बाँनियाको यात्राः अ म्युजिकल भल्ग र अनमोलको ‘ए मेरो हजुर ३’ सीने प्रेमीकाहरु लागि आज खास रेसीपी बनेका छन् । यी दुबै चलचित्रले आफ्नो रिलीज सँगै वर्ष २०७५ लाई बिदाइ गर्दैछन् ।
युवा पुस्ताका अत्यन्तै लोकप्रिय नायकहरु सलिमान र अनमोल बिचको शुक्रबारे भीडन्त रोचक हुने सीने प्रेमीहरुको अनुमान छ । कोटकी कालीकादेवी फिल्मस, क्रीएटीम फिल्म प्रोडक्सन र हरीओम सीने मेर्कसको व्यानरमा बनेको यात्रामा नव निर्देशक सम्राट शाक्यको डेव्यु निर्देशन रहेको छ । यस्तै सुनिल कुमार थापाको निर्माण रहेको चलचित्र ए मेरो हजुर ३ मा सुनिलकै छोरी सुहाना थापाको डेव्यु अभीनय रहेको छ ।
यात्रामा सलिन सँगै बाल कलाकारमा जमेका सलोन वस्नेत पनि देखने छन् । बाल कलाकारको रुपमा राम्रै गरी जमेका सलोन नायकको रुपमा खासै जम्न सकेका छैनन् । सलीनलाई यात्रामा जान्वी वस्नेत र प्रेक्षा बर्जाचार्यको पनि साथ रहेको छ । डेव्यु निर्देशकको निर्देशनमा बनेको यात्रामा डेव्यु नायीकाको पनि अभीनय रहेको छ । यसै फील्म सँगै मलीका महतले नायीकाको रुपमा डेव्यु गरेकी छन् ।
यता युवाहरुका ढुकढुकी बनिसकेका अनमोल ए मेरो हजुर ३ मा दोहोरोभुमीकामा देखिदै छन् । अनमोललाई चलचित्रकी निर्देशन झरना थापा र लगानीकर्ता सुनील थापाकी छोरी सुहानाले साथ दिएकी छन् । फील्ममा अनमोल र सुहाना सँगै यात्राका नायक सलोनको पनि अभीनय रहेको छ । हेरौ शुक्रबारे भीडन्तमा दुइ स्टारहरु अनमोल र सलीमान कसले बाजी मार्दै वर्ष २०७५ लाई बीदाइ गर्लान ? यसको उत्तर केही समय पछि नै सीने प्रेमीहरुले थाहा पाइसक्ने छन् ।
फिनल्याण्डमा रहेका गायक नविन भट्टराईको नयाँ प्रस्तुति ‘आमा’ बजारमा